ဂါမဏိ – သာကူး၏မူလအစ (ဗမာ့တပ်မတော် နှင့် ဂျပန်တော်လှန်ရေး) | MoeMaKa Burmese News & Media
(မိုးမခ) မတ် ၂၇၊ ၂၀၁၆
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်း အင်္ဂလိပ်အပါဝင် မဟာမိတ်တွေရှုံးနေပြီး ဂျပန်အပါဝင် ဖက်ဆစ်တွေနိုင်နေချိန်မှာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို့က အင်္ဂလိပ်ကိုမောင်းထုတ်ပြီး လွတ်လပ်ရေးရဖို့ ဂျပန်နဲ့ပေါင်းခဲ့တယ်။ BIA ခေါ် ဗမာ့လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် ဆိုတဲ့ ဒီဘက်ခေတ်ဗမာ့တပ်မတော်ရဲ့ရှေ့ပြေး လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်း ကို ဂျပန့်အကူအညီနဲ့တည်ထောင်ခဲ့တယ်။ ၁၉၄၃ သြဂုတ် ၁ ရက်တုံးက အင်္ဂလိပ်-အမေရိကန်-ပြင်သစ် တို့ကို ‘လွတ်လပ်တဲ့ဗမာနိုင်ငံ’က စစ်ကြေညာလိုက်သေးတယ်။ ဂျပန်က ရွှေရည်စိမ်လွတ်လပ်ရေးပေးခဲ့ပေ မဲ့လဲ၊ ဒါ့အပြင် ကမ္ဘာမှာ ဂျာမဏီ-ဂျပန်တွေ စစ်ရှုံးလာနေပေမဲ့လဲ ဗမာ့တပ်မတော်ဟာ ၁၉၄၅ မတ်လ ၂၇ ရက်အထိ ဂျပန်ကိုသစ္စာရှိနေခဲ့တယ်။
ဗမာ့တပ်မတော်ရဲ့ ဂျပန်တော်လှန်ရေးဟာ တခြားအရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေ၊ ဥရောပနိုင်ငံတွေထက် အများကြီးနောက်ကျရုံမက ဗမာပြည်ထဲက တခြားတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ နောက်ကိုတောင် ရောက်နေခဲ့လို့ သာကူးဝေါဟာရနဲ့ အင်မတန်ကိုက်ညီနေတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီကနေ့မှာတော့ ဂျပန်တော်လှန်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ ဗမာ့တပ်မတော်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုဘဲ ဖူးဖူးမှုတ်အမွှမ်းတင်နေပြီး တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ သီးခြားဂျပန်တော် လှန်ရေးတွေ သမိုင်းမှာဖျောက်ဖျက် မေ့လျော့ခံနေရတယ်။ တကယ်တော့ ဗမာ့တပ်မတော်ဟာ ဂျပန် တော်လှန်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ အင်မတန့်ကိုသာမှကူးတဲ့ တကယ့် ‘သာကူး’ အကြီးစားကြီးဖြစ်နေသလို သူ့ကို မွေးထုတ်ပေးတဲ့ဖခင် ဖက်ဆစ်ဂျပန်စစ်တပ်နဲ့ ဖက်ဆစ်ဝါဒကို လက်တွေ့အရ၊ အတွေးအခေါ်အရ သံယော ဇဉ်မပြတ်နိုင်တာကိုလဲ အဲ့ဒီကာလတုံးကရော၊ အခု နှစ် ၇၀ ကျော်ကြာပြီး ၂၁ ရာစုအထိပါ တွေ့နေရပါ ကြောင်း။
အလားတူ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ စာများ၊ ဆောင်းပါးများ ...:ဂါမဏိ, ရသဆောင်းပါးစုံ, သူတို့အာဘော်
4 Responses to ဂါမဏိ – သာကူး၏မူလအစ (ဗမာ့တပ်မတော် နှင့် ဂျပန်တော်လှန်ရေး)
banyar lin on March 27, 2016 at 6:17 am
I am 100% Burmese Buddhist but this article is exactly right 100% true
Khi nMaung Saw on March 27, 2016 at 9:36 pm
Japanese-trained Indonesian Army too revolted against the Japanese. However, their revolution was not participated by the whole Japanese-trained Indonesian Army. The “Peta” battalion headed the revolution. Heiho (known as “Chway Tat” in Burma) andafew other troops joined them. (See details in; Joyce Lebra Japanese Trained Armies in Southeast Asia, page 155).
Strictly speaking, also in Burma not all of the Japanese-trained Burmese Army revolted against the Japanese. One battalion headed by Bo Yan Naing, Dr. Ba Maw’s son-in-law, did not join the revolution. Bo Yan Naing denounced Bo Aung San and the revolted army as “Traitors”or “Renegades”.
U Min Khin on March 28, 2016 at 11:15 am
စာရေးသူ ဂါမဏိအနေနဲ့ ဒီထက်ပိုပြီး ထည့်ဆွေးနွေးသင့်တာ ရှိပါသေးတယ်။ အဲတာကတော့ အခြား မြန်မာမျိုးချစ်တွေနဲ့ မြန်မာကွန်မြူ နစ်တို့ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍပါ။
ဂျပန်က မြန်မာပြည် မဝင်ခင်ကတည်းက ဖက်ဆစ်ရဲ့သရုပ်တွေကို မြန်မာခေါင်းဆောင်တွေက စပြီး ထောက်ပြ ဆန့်ကျင်ခဲ့ကြတယ်။ စာအုပ်ရေးသူရှိသလို လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးလမ်းကြောင်းကို စကတည်းက ဆန့်ကျင်ခဲ့သူတွေရှိတယ်။ လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းရာမှာ လမ်းကြောင်းအမြင် သုံးခုကွဲခဲ့တယ်။ အဲဒီအထဲမှာ ဖက်ဆစ်စနစ်ဟာ အရင်းရှင်ရဲ့ အဆိုးဆုံးအဆင့်တခု ဖြစ်တဲ့အတွက် သူ့လောက်မဆိုးတဲ့ အင်္ဂလိပ်နဲ့ ပေါင်းပြီးဆန့်ကျင်ရမယ် ဆိုတဲ့ သခင်စိုး၊ တက်ဘုန်းကြီးသိန်းဖေ (သိန်းဖေမြင့်)၊ သခင်ဗိုလ်၊ သခင်ကျော်စိန်အစရှိတဲ့ မြန်မာကွန်မြူ နစ်များရဲ့အမြင်ဟာ သဘောတရားအရရော လက်တွေ့အရပါ အမှန်ဆုံးဖြစ်တယ်။
လက်တွေ့လုပ်ငန်းကို တက်ဘုန်းကြီးသိန်းဖေက ဦးဆောင် လုပ်ကိုင်သွားပြီးတော့ မဟာမိတ်တွေဆီက လက်နက်အထောက်အပံ့နဲ့ ရခိုင်၊ နောက် မြန်မာပြည်မှာ လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေး၊ မဟာမိတ်တွေကို ပံ့ပိုးကူညီရေးတွေမှာ ထိထိရောက်ရောက် လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။ သဘောတရားရေးလုပ်ငန်းကို သခင်စိုးက ဦးဆောင်ခဲ့တယ်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ ဗမာ့တပ်မတော်ကို လမ်းကြောင်း ချပေးနိုင်ခဲ့တယ်။ တာပေမယ့် ဂျပန်တော်လှန်ရေးသမိုင်းမှာ အဓိကကဏ္ဍတခုဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကွန်မြူ နစ်ပျောက်ကျားတို့ကဏ္ဍဟာ သမိုင်း အဖျောက်ခံလိုက်ရတယ်။
ဒီနေရာမှာ သမိုင်းကို ပြောခဲ့ ရေးခဲ့တာတွေ ပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင် ကိုယိလိုချင်တဲ့ အများအတွက်ဖြစ်စေ ပုဂ္ဂလိကဖြစ်သေ အကျိုးစီးပွားရဖို့အတွက် ဖုံးတန် ဖုံး၊ ဖိတန် ဖိ၊ တစိတ်ကို တအိတ်၊ တအိတ်ကို တစိတ် လှည့်ပါတ်ပြောတာ ရေးတာ မှန်တယ်။ တဲ့ပြောရရင် အကျိုးစီးပွားအတွက် လိမ်တာမှန်တယ်ဆိုတဲ့ အခြေခံစဉ်းစားပုံကို ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်လာရပါလိမ့်မယ်။
Dr. Zhivaka(Kambawza) on March 29, 2016 at 10:22 pm
As Lepards never change their spots, army people always stuck on their mindset and rigid mentality for their own interests and not for all people in the country. Hypomaniac ideology and impaired PFC( Prefrontal Cortex) & ACG( Anterior Cingulate Gyrus) in brain functions for critical thinking and proper judgements are their mindset.